Filaza ifampiankinana - Wikipedia
Ny filaza ifampiankinana dia endriky ny matoanteny izay ilazana zavatra heverina fa an'eritreritra na nofinofy fotsiny ka mifanohitra amin'ny filaza tsotra izay enti-manambara zavatra heverina fa misy na mitranga marina. Tsy misy filaza ifampiankinana ny fiteny malagasy. Amin'ireo fiteny ahitana io filaza io dia ny filazam-potoana ankehitriny sy ny endrika efa (izay lazain'ny mpanoratra fitsipiteny hoe "lasa") mifandraika amin'io no fahita nefa misy fiteny sasany izay ahitana filaza ifampiankinana amin'ny filazam-potoana hoavy (efa sy tsy efa), dia ny fiteny portogey sy ny fiteny espaniola ary fiteny hafa maro koa.
Ny hevitra tiana hampitaina amin'ny fampiasana ny filaza ifampiankinana dia maro ka isan'izany ny firariana, ny fihetseham-po, ny fahafahan'ny zavatra iray hitranga, ny zavatra tsy maitsy tanterahina, ny zavatra mbola tsy mitranga sns. Mifanakaiky hevitra amin'ny filaza mirary ny filaza ifampiankinana rehefa ampiasaina anaty fehezankevitra tsy miankina. Ao amin'ny fiteny sasany dia misolo ny filaza mandidy ny filaza ifampiankinana amin'ireo lahara-mpadray anjara am-pehezanteny tsy ahitana endrika mandidy mifadraika aminy. Matetika dia ny rafi-pehezanteny no mibaiko ny fampiasana ny filaza ifampiankinana. Ao amin'ny fehezankevitra miakina no tena ampiasana azy ka ny hevitry ny mpampiankina fehezankevitra na ny hevitry ny fehezankevitra iankinana no mitaky na tsia io filaza io.
Ireto avy ireo fiteny ahitana ny filaza ifampiankinana: ny fiteny akadiana, hebreo, grika taloha, sanskrity, alemàna, albaney, irlandey, latina, portogey, espaniola, italiana, frantsay, romaniana, galoa, gaelika ekosey, nerlandey, poloney, bolgariana, arabo, hongariana sy ny maro hafa koa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filaza_ifampiankinana&oldid=971516"
Voaova farany tamin'ny 19 Jiona 2019 amin'ny 05:02 ity pejy ity.